hoy Ramamimampionona Gérard. “Isehoan’izany na ireo samy eo amin’ny fitondrana sy ireo mpanohana azy, toy izany ny eo anivon’ny mpanohitra”, hoy ity filoha lefitry ny Conseil du Fampihavanana Malagasy na CFM sady mpandinika fiarahamonina ity. Ny vazaha mody miady, hoy Ramamimampionona Gérard fa isika nanjary mody mihavana noho io tsy fisian’io fifampitokisana io. Manampy trotraka an’izany, hoy izy, ny elanelana eo anivon’ny fiarahamonina ateraky ny fahaizana, fivavahana, fanana-karena, politika ary ny fihaviana na foko. Mifanohitra amin’ny kolontsaina Malagasy mandala ny fihavanana anefa ireo. Isika izay manana ny kolontsaina taterim-bava ihany koa, amin’ny lovantsofina izay midika fa nifampihaino, nifampiresaka dia nifanao tenierana tamin’izay zavatra rehefa natao.”Mbola azo avotana ny zava-misy”; hoy ity mpikambana ao amin’ny CFM ity. Modely entin’izy ireo amin’izany ny fifampitondrana, fifampifehezana amin’ny “Kianja” hita ao amin’ny Kaominina Andriambilany, Distrika Ambatolampy. Milamina ny fiarahamonina, mirindra ny fihariana, tsy olona hadino eny fa na hatramin’ny zaza vao teraka aza. Efa vita rakin-tsary ary ezahin’ny CFM zaraina maimaimpoana amin’ny vondron’olona, vondrombahoakam-paritra, fiangonana … mila izany ity maodelim-piarahamonina ao Andriambilany ity.